My iPhone ihuenyo bụ nwa! Nke a bụ ezigbo ihe kpatara ya. - Iphone
itunes na -eweghachi software na iphone a
ekpere tupu ịwa ahụ maka enyi
kedu ka m ga -esi emeghe ntụgharị ihuenyo m na ipad m
imessage na -eche ka ịgbalite iphone
My iPhone ihuenyo bụ nwa! Nke a bụ Ezigbo Ihe Mere.
Gị iPhone dị, ma na ihuenyo bụ nwa. IPhone gị na-ada ụda, ma ị nweghị ike ịza oku ahụ. Tried gbalịrị ịtọgharị iPhone gị, na-ahapụ ya ka ọ gwụchaa na batrị ma tinye ya na ya, na ihuenyo iPhone gị ka oji . N'isiokwu a, m ga-akọwa mere gị iPhone ihuenyo wee nwa na ihe ị ga - eme iji dozie ya.
Gịnị Mere My iPhone Screen Black?
Ihuenyo ojii na-ebutekarị nsogbu ngwaike na iPhone gị, yabụ na-enwekarị adịghị ngwa ngwa. N'ikwu ya, otu ngwanrọ ngwanrọ nwere ike mee ka ngosipụta iPhone gị kpụkọọ ma gbanwee nwa, yabụ ka anyị nwaa nrụpụta siri ike iji hụ ma ọ bụ ihe na-eme.
Iji mee nrụpụta siri ike, pịa ma jide bọtịnụ ike (nke a makwaara dị ka bọtịnụ Ihi ụra / Tetanụ) na Igodo ụlọ (bọtịnụ okirikiri n'okpuru ngosipụta) ọnụ maka ọ dịkarịa ala 10 sekọnd.
Na iPhone 7 ma ọ bụ 7 Plus, ị na-arụ nrụpụta siri ike site na ịpị na ijide olu ala button na bọtịnụ ike n'otu oge ruo mgbe ị na-ahụ Apple logo-egosi na ihuenyo.
Ma ọ bụrụ na ị nwere iPhone 8 ma ọ bụ nke ọhụrụ, mee nrụpụta siri ike site na ịpị ngwa ngwa na ịtọhapụ bọtịnụ olu elu, wee pịa ngwa ngwa ma tọhapụ bọtịnụ olu ala, wee pịa ma jide bọtịnụ ike (iPhone 8) ma ọ bụ bọtịnụ n'akụkụ. (iPhone X ma ọ bụ ọhụrụ) ruo mgbe akara Apple ahụ pụtara.
Ọ bụrụ na akara Apple gosipụtara na ihuenyo ahụ, enwere ike ọ bụghị nsogbu na ngwaike nke iPhone gị - ọ bụ ngwanrọ ngwanrọ. Lelee ederede m ọzọ na oyi kpọnwụrụ iPhones , nke ga - agwa gị ihe ị ga - eme iji dozie iPhone gị. Ọ bụrụ na akara ngosi Apple apụtaghị na ihuenyo ahụ, nọgide na-agụ.
Ka Anyị Lelee Anya n’ime iPhone gị
A mkpirisi njem nke gị iPhone ga-enyere gị aka ịghọta ihe mere gị na ihuenyo bụ nwa. Enwere ngwaike abụọ nke ngwaike anyị ga-ekwu maka ya: Nke gị iPhone ngosipụta na bọọdụ mgbagha .
The mgbagha osisi bụ ụbụrụ n'azụ ọrụ nke gị iPhone, na akụkụ ọ bụla nke gị iPhone-ejikọ ya. Na ngosipụta na-egosi gị ihe onyonyo ị hụrụ, mana bọọdụ mgbagha agwa ya Kedu gosipụta.
Iwepụ Ihe Ngosipụta iPhone
Ngosipụta niile nke iPhone gị bụ nke mbughari, mana ọ bụ ọtụtụ ihe mgbagwoju anya karịa ka ị nwere ike iche! E nwere ihe anọ dị mkpa etinyere n’ime ngosipụta iPhone gị:
Ihuenyo LCD, nke gosipụtara ihe oyiyi ị hụrụ na iPhone gị.
Na digitizer , nke bụ akụkụ nke ngosipụta na-emetụ aka. Ọ digitizes mkpịsị aka gị, nke pụtara na ọ na-atụgharị aka nke mkpịsị aka gị gaa na asụsụ dijitalụ nke iPhone gị nwere ike ịghọta.
Igwefoto chere ihu.
Akụkụ ọ bụla nke ngosipụta iPhone gị nwere a iche njikọta nke plọg n'ime gị ezi uche osisi. Ọ bụ ya mere ị ga-eji nwee ike iji mkpịsị aka gị gafee ihuenyo ahụ, agbanyeghị na ihuenyo ahụ dị oji. Digitizer ahụ na-arụ ọrụ, mana LCD anaghị arụ ọrụ.
Mkpisi ojii na-emetụ njikọ njikọta ihe ngosi
N'ọtụtụ ọnọdụ, gị iPhone ihuenyo bụ nwa n'ihi na USB na-ejikọ LCD ka mgbagha osisi aghọwo dislodged. A na-akpọ eriri USB a njikọ data ngosi. Mgbe ihe ngosi data ngosi gosipụtara na bọọdụ mgbagha, enwere ike idozi iPhone gị site na ịkwụnye ya azụ.
Enwere ikpe ndị ọzọ ebe nrụzi adịghị mfe, nke ahụ bụ mgbe LCD n'onwe ya mebiri emebi. Mgbe nke ahụ mere, ọ baghị uru ma ọ bụrụ na LCD ejikọtara ya na bọọdụ mgbagha ma ọ bụ na ọ bụghị - agbajikwa ya na ọ dị mkpa ka edochi ya.
Kedu ka m ga-esi mara ma achụsasị ihe ngosi m ma ọ bụ agbaji?
Ọ na-esiri m ike ide ihe a n’ihi na ọlị bụ iwu siri ike na ngwa ngwa, mana m nwee Achọpụtara m ụkpụrụ na ahụmịhe m na-arụ na iPhones. Enweghị nkwa ọ bụla, mana usoro isi aka m bụ nke a:
ipad agaghị anọgide na -ejikọ na wifi
Ọ bụrụ na ngosipụta iPhone gị kwụsịrị ịrụ ọrụ mgbe emechara ị hapụrụ ya , ihuenyo gị nwere ike ịbụ oji n'ihi eriri LCD (ihe njikọ data ngosi) ewepụla na bọọdụ mgbagha.
Ọ bụrụ na ngosipụta iPhone gị kwụsịrị ịrụ ọrụ mgbe emechara mmiri gwụchara, ihuenyo gị nwere ike ịbụ nwa n'ihi LCD agbajiri ma chọọ ka edochi ya.
Etu esi edozi ihuenyo Black iPhone
Wayzọ ị na-ahọrọ ịga n'ihu nwere ike ịdabere na eriri LCD iPhone gị ewepụla site na bọọdụ mgbagha ma ọ bụ ọ bụrụ na LCD agbajiri. Nwere ike iji iwu m si n'elu mee ka ị gụọ akwụkwọ.
Ọ bụrụ na eriri LCD apụọla, Ogwe Genius na Applelọ Ahịa Apple nwere ike idozi ya n'efu, ọbụlagodi na iPhone gị si na akwụkwọ ikike. Nke ahụ bụ n'ihi na ndozi dịtụ mfe: Ha ga-emeghe iPhone gị ma jikọgharịa eriri digitizer na bọọdụ mgbagha. Ọ bụrụ na ị kpebie ịga n'okporo ụzọ a, gbaa agba na Genius Bar tupu ị bịarute - n'ụzọ ọzọ, ịnwere ike ịkwụsị iguzo obere oge.
Ọ bụrụ na LCD agbaji, nke ahụ bụ akụkọ ọzọ. Ọ pụrụ ịbụ nnọọ oké ọnụ ịrụzi gị iPhone ngosi, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-aga site na Apple. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị elu, nke na-adịghị ọnụ, m na-akwado ya Pulse , ọrụ mmezi nke mmadụ ga-abịakwute gị, dozie iPhone gị na ntụpọ ahụ, ma nye gị oge ndụ gị niile.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta iPhone ọhụrụ karịa ka ịmezie nke ugbu a, lelee UpPhone ahụ ekwentị tụnyere ngwá ọrụ . Nwere ike iji tụnyere ọnụ ahịa nke ọ bụla ama na bụla wireless ụgbọelu. Ndị na-ebu ụgbọ mmiri chọrọ ka ị gbanwee na netwọkụ ha, yabụ ị nwere ike ịchọpụta na ị nwere ike ịnweta iPhone ọhụrụ maka ihe dịka otu ụgwọ ahụ maka ịrụzi nke ugbu a.
Idozi iPhone Gị Onwe Gị Abụkarịghị Ezigbo Echiche
Star-ekara (pentalobe) kposara gị iPhone emechi
Ekwesighi ka onye ọrụ mepee iPhone. Naanị lee anya na kposara abụọ na-esote ọdụ ụgbọ mmiri nke iPhone gị - ha bụ kpakpando! N'ikwu ya, ebe ahụ dị ndozi ndozi magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmetụta dị egwu. Ewepụtara m ihe onyonyo dị n’isiokwu a site na ndozi ndozi na iFixit.com akpọrọ iPhone 6 N'ihu Panel Assembly Nnọchi . Nke a bụ nkọwa dị mkpirikpi nke isiokwu ahụ nke nwere ike iyi nke ọma:
“Mgbe ịghaghachi ekwentị gị, eriri data ngosi nwere ike ịpụta na njikọ ya. Nke a nwere ike ibute ọcha ma ọ bụ ihuenyo oghere mgbe ị na-agbanye ekwentị gị azụ. Ọ bụrụ na nke ahụ emee, biko jikọgharịa ekwentị na okirikiri ekwentị gị. ” Isi Iyi: iFixit.com
Ọ bụrụ na ị kwenyere na eriri USB LCD gị (eriri data ngosi) ewepụla kpamkpam na bọọdụ mgbagha, ị maara nke ọma, na ịga na Storelọ Ahịa Apple abụghị nhọrọ, na-ejikọ eriri data ngosi na bọọdụ mgbagha abụghị na siri ike, ọ bụrụ na ịnwere ezigbo ngwaọrụ.
Dochie ngosipụta bụ ukwu mgbagwoju anya n'ihi ọnụọgụ nke ihe mejupụtara. Ka m doro anya: M emela na-atụ aro ka ị gbalịa idozi nsogbu a n'onwe gị, n'ihi na ọ dị oke mfe imebi ihe na 'brik' gị iPhone.
Know Maara Ihe Have Ga-eme
Imirikiti ndị na-agụ akwụkwọ agaghị enwe ike idozi ihuenyo iPhone ha naanị site n'ịgụ isiokwu a, n'ihi na ihuenyo ojii ojii anaghị abụkarị nsogbu nke ngwanrọ. Ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma ruo mgbe ihuenyo gị iPhone gara oji. Ugbu a, ị nweghị ike iji iPhone gị ma ọlị, mana gị mee mara ihe ị ga-eme na-esote. Enwere m mmasị ịnụ ka ị siri dozie iPhone gị na ngalaba nke dị n'okpuru, na ahụmịhe ọ bụla ị nwere ike ịnye ga-enyere ndị ọzọ na-agụ akwụkwọ nwere otu nsogbu ahụ aka.
Ihe niile Ihe oyiyi iPhone n'isiokwu a site Walter galan na ikikere n'okpuru CC BY-NC-SA .